CU BOULDER တွင်သင်ပထမနှစ်တစ်နှစ်အကြောင်းကိုသင်မေးမြန်းခဲ့သောမေးခွန်းများအတွက်အဖြေများအားလုံး - နှုန်းထားများ
CU Boulder တွင်သင်ပထမနှစ်တစ်နှစ်အကြောင်းကိုသင်မေးမြန်းခဲ့သောမေးခွန်းများအတွက်အဖြေများအားလုံး
Freshman Year သည်ကိတ်မုန့်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သော်လည်းသင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ The Tab CU Boulder သည်သင်ဖုံးထားခဲ့သည်။ သင်မေးသောမေးခွန်းများအားလုံးနှင့်အကောင်းဆုံး Baby Buff ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးနှင့်အဖြေများရှိပါသည်။
ကျောင်းဝင်းရှိဝိုင်ဖိုင်နှင့်ဆက်ဆံခြင်းမှမည်ကဲ့သို့ပါ ၀ င်ရမည်ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်သင်၏ဆက်စပ်နေသောအရာအားလုံးမှသင်၏အဓိကမေးခွန်းများကိုဖြေကြားလိမ့်မည်။
Dame သွားလာရင်း coed Notre လုပ်ခဲ့တယ်သည့်အခါ
TO: အထူးသဖြင့် Farrand Field အနီးရှိကျောင်းဝင်း၌နေထိုင်လျှင်၎င်းသည်အဆိုးဝါးဆုံးမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ရံဖန်ရံခါမှေးမှိန်သွားနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်အွန်လိုင်းစာမေးပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်သင်တစ်ခုခုအလယ်တွင်ရောက်နေလျှင်၎င်းသည်ပြreallyနာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အလွယ်ကူဆုံးဆက်သွယ်နိုင်သည့်ကွန်ယက်မှာ 'UCB Guest' ဖြစ်ပြီး sign-on သည်အမှန်ပင်ရှေ့သို့သွားနေသည်။
TO: ဝမ်းနည်းစရာက ၂၀၂၁ အတန်းအစားသည် Libby ၏ထမင်းစားခန်းခန်းမဖြစ်သော GOAT ကိုမည်သည့်အခါမျှမသိနိုင်သော်လည်း၊ သင်၌အစားအစာစခန်းများများပြားသော C4C (Community for Community) အသစ်ရှိသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုတောင်သင်မသိနိုင်ပါ။ Farrand Hall တွင်သင်အမြန်စားချင်လျှင်စျေးကွက်တစ်ခုနှင့်ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်သည်။ ဗဟိုကျောင်းဝင်းအိပ်ဆောင်များနှင့် Kittredge တွင်နေထိုင်သောသူများသည် C4C နှင့် Farrand တွင်သူတို့၏ထမင်းဘူးများအများစုကိုအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သင့်သည်။ Sewall မှာနေခဲ့သလား။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒါကအဆိုးဆုံးမဟုတ်ဘူး။ သင်က The Hill နှင့်နီးသည် နှင့် သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထမင်းစားခန်းနှင့်စျေးကွက်တွင်သင့်ကိုယ်ပိုင်စျေးကွက်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Will Vill ကလေးတွေ၊ သင်ဟာလူသတ်သမားအသစ်စားသောက်ခန်းသုံးအပန်းဖြေစခန်းအချို့ကိုအမှန်တကယ်ကံကောင်းထောက်မစွာပေးခဲ့တယ်။ Buff ဘတ်စ်ကားအားသင့်အားမကျစေပါနှင့်၊ Cus တွင်အကောင်းဆုံးအစားအစာနေရာသည်ကျောင်းဝင်းပြင်ပ၌ရှိသော်လည်းရိုးသားပါသည်။
မေး။ ။ တကယ့်ကိုအိပ်ဆောင်အခန်းတွေကိုပိတ်ပင်ထားတာလား။
TO: ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကသူတို့က ၃ ပေ ၃ ပေထက်ပိုကြီးတယ်ဆိုရင်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့သင်ဟာအဲဒါကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဘယ်လောက်အေးတယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့် RA ကိုအရွယ်အစားခွဲပါ။ သင့်တံခါးကိုဖွင့်သောအခါသို့မဟုတ်ပြတင်းပေါက်ကတဆင့်မြင်သောအခါစင်္ကြံမှသင်၏နံရံပေါ်တွင်သူတို့မမြင်နိုင်ပါက၎င်းကိုသင်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ သို့သော်အခန်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်စဉ်က၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်သတိရပါ။ ဖယောင်းတိုင်များ၊ ချော်ရည်မီးခွက်များနှင့်ထိုအရာအားလုံးမှဝေးဝေးရှောင်ပါ။ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမှမီးဘေးသတိပေးချက်ကိုပိတ်ထားရသည့်အကြောင်းအရင်းဖြစ်ချင်သည်။
TO: သင်၏ Buff One Card ဖြင့်! ကျောင်းဝင်းငွေသားကို သုံး၍ သင်ကကျောင်းပရဝုဏ်အတွင်းရှိမည်သည့်ပုံနှိပ်စက်ကိုမဆိုပွတ်ဆွဲနိုင်သည်။ အချို့သည်ရွေးချယ်ထားသည့်အိပ်ဆောင်များ၌ပင်ရှိနေပြီးသင်လိုအပ်သမျှကိုပုံနှိပ်နိုင်သည်။ သို့သော်တစ်စာမျက်နှာလျှင် ၁၀ ဆင့်ခန့်ကုန်ကျသည်၊ မင်းရဲ့ Buff One ကမင်းကိုမင်းရဲ့အဆောက်အအုံထဲကို ၀ င်လာမှာဖြစ်ပြီးထမင်းစားခန်းခန်းမမှာမင်းရဲ့ညစာစားပွဲကိုခြေရာခံပြီး Rec ကိုခုန်ချလိမ့်မယ်။
TO: Buff တွေအများကြီးက 19 ပွတ်ဆွဲတဲ့မုန့်ညက်အစီအစဉ်နဲ့သွားကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစားအစာတွေကဖြုန်းတီးသွားမယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။ အစားအစာ ၁၅ ခုက munch ပိုက်ဆံအတွက်အပိုဒေါ်လာ ၅၀ ကိုပေးတယ်၊ ဒီဟာစာသင်တာအကုန်လုံးအတွက်ဖြစ်ပြီးဝေးကွာလွန်းနေသေးတယ်၊ သင်တစ်ပတ်လောက်လေ့လာဖို့ရေခဲမုန့်တွေအတွက် Farrand Market ကိုတက်လာမှာပါ။ သင်ဘယ်လောက်မကြာခဏစားသည်၊ မည်မျှထိုင်မည်စားမည်ဟုသင်ထင်သလဲ၊ အကယ်၍ သင်သည်ပုလဲလမ်းသို့မဟုတ်ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင်စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်အစာစားရန်စီစဉ်နေပြီးထိုနေရာမှစီစဉ်ပါ။
မေး။ ။ စာအုပ်စာရင်းထဲကစာအုပ်တိုင်းကိုငါရဖို့လိုသလား။
TO: မဟုတ်ဘူး! သင်လိုအပ်သည်ဟုမှတ်သားထားသည့်အရာကိုသာသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပါမောက္ခများကအရာရာကိုပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မည်။ သင်စာအုပ်များကို CU Bookstore မှတဆင့်ကြိုတင်မှာယူပါကသင်မလိုအပ်တော့သည့်အရာများနှင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ စိတ်ပူစရာမလို - ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်စာသင်နှစ်အကုန်တွင်ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း။ သတိပေးခံရ, သင်သည်ဤသို့ပြုသည့်အခါသင်အချို့ငွေဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။ CU အတန်းအစား Facebook စာမျက်နှာများရှိအခြား Buffs များသို့လည်းသင်ရောင်းချနိုင်သည်။ မလိုအပ်သောစာအုပ်များ ၀ ယ်ရန်ဖိအားပေးနေဆဲလား။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသီတင်းပတ်၏ပထမရက်သတ္တပတ်များအထိစောင့်ဆိုင်းပြီးသင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များကသင့်အားပြောပြရန်ကိုကြည့်ပါ။ သင်သည်ငါ၏ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မဟုတ်သိလိုလျှင် Online My Rate ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည် တကယ် တစ်ပေါင် Chem စာအုပ်လိုအပ်ပါတယ်။
TO: အတန်း၏ပထမ ဦး ဆုံးရက်အနည်းငယ်လမ်း Chilling ဖြစ်ကြသည်။ ပါမောက္ခတစ် ဦး သို့မဟုတ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်မပါရှိလျှင်သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်မှာလက်ကမ်းစာစောင်များနှင့်ပုံနှိပ်ထားသောသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုသိမ်းဆည်းရန်ဖိုင်တွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရာဝတ္ထုများကိုချရေးရန်ဘောပင်သို့မဟုတ်ခဲတံနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်ခုန်။ ခုန်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
TO: clicker ဆိုသည်မှာ iClicker ဖြစ်သည်။ အချို့ပါမောက္ခများသို့မဟုတ်ကထိကများကကျောင်းသားများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ ပါ ၀ င်မှုခရက်ဒစ်ပေးရန်၊ တက်ရောက်သူကိုစစ်ဆေးရန်စသည်တို့ကိုခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်အသုံးပြုသည်။ သင်စာအုပ်ကိုသင်ရိုးညွှန်းတမ်းသို့မဟုတ်သင်၏စာအုပ်စာရင်းတွင် CU Bookstore သို့မဟုတ် Amazon မှတစ်ဆင့်သင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ သူတို့ကတော်တော်လေးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားနိုင်သည်၊ ဒါကြောင့်အမှုတစ်ခု ၀ ယ်ခြင်းသည်အဆိုးဆုံးအတွေးမဟုတ်ပါ။ သဘောတူညီချက်ရှာနေပါသလား ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အတန်းများရှိမည်သူမဆို၎င်းတို့ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားနေသည့်မည်သည့်နှိပ်စက်များရှိမရှိသိရန်မေးကြည့်ပါ။
Q: CU Sports Pass ကိုဝယ်သင့်ပါသလား။
TO: မူတည်ပါတယ်။ ဘောလုံးကစားပွဲကိုသွားဖို့စီစဉ်နေပါသလား။ Ralphie လည်ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အိပ်ရာပေါ်ကိုအိတ်ထဲထည့်ထားတာ၊ အမှောင်ကျတာတွေ၊ ၀ ယ်သူအများစုဝယ်ယူထားသောအဓိကအားကစားပွဲများသည် Coors Event Center ရှိအမျိုးသားဘောလုံးဘတ်စကတ်ဘောကစားပွဲများကိုသင့်အားခွင့်ပြုပေးသည်။ ၎င်းသည်အဓိကကျောင်းဝင်းမှတိုးမြှင့်ခြင်းနည်းသော်လည်းပျော်စရာများစွာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အားကစား၌ကစားနေပြီးအချိန်ရှိလိမ့်မည်ဟုထင်ပါကဖြတ်သန်းမှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ပထမနှစ်အတွက်ပျော်ရွှင်စရာအခွင့်အလမ်းများကိုပေးလိမ့်မည်။
TO: ဂရိဘဝသည်ကလေးများမျှော်လင့်ထားသည့်တောင်ပိုင်းကျောင်းပုံစံထက်တောင်ကော်လိုရာဒိုတွင်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတံတိုင်းများနှင့်ကပ်လျက်ဂရိဘဝသည်အလွန်အေးမြသည်။ မင်းမှာသူငယ်ချင်းတွေရှိဖို့မလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီပထမလကျောင်းမှာပိုပြီးပါ ၀ င်ဖို့၊ သူငယ်ချင်းအသစ်လုပ်ဖို့နဲ့အလုပ်များဖို့ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုရှိတယ်။ frat သို့မဟုတ် srat ဘဝသည်သင်အတွက်ဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊ စုဆောင်းရေးကိုသွားပါ။ သင်နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Q: CU ရှိပါတီမြင်ကွင်းကဘာလဲ။
TO: အကယ်၍ သင်ကလွဲသွားရင် CU သည်နိုင်ငံ၏အဆင့် ၇ တွင်ရှိသည် ယင်း၏ခက်ခဲ - ပါတီနည်းလမ်းများသည်။ ဒါဟာသင်လုပ်တဲ့အလုပ်ပဲ။ အကယ်၍ သင်သည်စာအုပ်များကိုထိမှန်ရန်သို့မဟုတ်စုစုပေါင်းနှင်းလျှောစီးကစားသမားဖြစ်လိုပါကထိုဒေသများကိုအာရုံစိုက်ပြီးအလွန်အမင်းပျောက်ဆုံးမည်ကိုမစိုးရိမ်ပါနှင့်။ စာအုပ်များနှင့်ပါတီပွဲများအကြားမျှတမှုကိုရှာဖွေခြင်းသည် CU တွင်လုံးဝလုပ်နိုင်သည်၊ သင်ကိုယ်တိုင်၊ သင့်အတွက်မည်သည့်အရာကအကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကို ဦး စား ပေး၍ တွက်ချက်ရမည်။
Q: ကလပ်အသင်းများ၊ အားကစားအသင်းများနှင့်ပျော်စရာကောင်းသည့်အရာများနှင့်မည်သို့ပါ ၀ င်ရမည်နည်း။
TO: ရိုးရိုးလေးပါ - သင့်မျက်လုံးများကိုစိုစွတ်အောင်ထိန်းထားပါ။ CU တွင်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကလပ်အရေအတွက် ၄၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိပြီးအများစုမှာကျောင်းသားများဖြစ်ကြသည်။ စာသင်နှစ်၏ပထမအပတ်အတွင်းတွင်ဝိုင်း ၀ န်းခြင်း၊ UMC တွင်အုပ်စုများတင်ခြင်းနှင့်ကျောင်းဝင်းပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပြန့်ပွားနေသောလက်ကမ်းကြော်ငြာများအတွက်သင့်မျက်လုံးကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှုပါ။ ဒီစာသင်ချိန်မှာအသင်းဝင်သစ်တွေကိုဘာတွေအားကစားအသင်းတွေရှာနေသလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ The Rec ကိုကြည့်ပါ။ အထက်ပိုင်းဘတ်စကက်ဘောတရားရုံးများနှင့် ဖြတ်၍ တည်ရှိသောရှေ့စားပွဲသို့မဟုတ်ကလပ်အားကစားစားပွဲခုံတွင်သင်မေးပါကသူတို့သည်သင့်အားလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။
တက် hit ဖို့အခမဲ့ခံစားရသည် The Tab CU သင်၏စိတ်ထဲတွင်အခြားရှိနေဆဲဖြစ်သောမေးခွန်းများနှင့်အတူ။ အိုး၊ ငါတို့ ~ tabulous အဖွဲ့ထဲဘယ်လိုဝင်ရမလဲလို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်ကိုဒီမှာရပြီ။